Accueil > Gazetin'ny nosy > Lavamaso
Misy ireo mpisotro sasany rehefa avy nisotro mba mahatsapa tene hoe “AOKA IZAY… AOKA IZAY”. Ny hafa indray raha tsy “DAOZY” mihitsy tsy miala ary dia ny mandrefy lalana sy ny mandry an-tatatra no nosafidiany.
I Razafe dia anisan’ny mamo mandrefy lalana. Tsy tonga akory tany an-trano, fa niala tsy lavitra ny toerana nisotroany, dia PORITRA TE-HIPIPY ny havana. Ts nasiany “quoi” izay toera azo hanaovana ny fahaporetany fa dia teo ambody rindrin’olona no nodonainany.
Tovovavy roa sendre nandalo teo akaikiny, tsy nahafantatra izay nataony raha tsy efa ho roa metatra, no nivily lalana somary nanao tari-dositra. Dia Razefa no niantso tamin’izato lela efa miraikitra : “MATAHOTRA, ANGAHA, IANAREO ?… AZA MATAHOTRA FA EFA VOATAZOKO AMIN’NY LOHANY ITY E !”